Iskaashi lala yeesho Norway xagga badda ee waarta - Wasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Iskaashi la leh Norway xagga badda ee waarta
Iskaashi la leh Norway xagga badda ee waarta
Waxaa laga yaabaa 15, 2018
Mudane. Jo Sletbak, Qunsulka Guud ee Qunsuliyadda Boqortooyada Noorway ee San Francisco, ayaa ka bilaabay shirkeena ganacsiga iyo ganacsiga meherad ku saabsan hal-abuurnimada tikniyoolajiyadda badda 4-tii Maajo ee Seattle. Noorway waa hogaamiyaha aduunka ee tikniyoolajiyadda badda ee waara iyo hal-abuurnimada.
“Waxaan rajeyneynaa inaan dhisno iskaashi iskaashi oo dhexmara shirkadda Norwegian Maritime Clean Tech iyo xirmooyinka sii kordhaya ee Washington Maritime Blue. Maaddaama aan horumarinayno xarun aad u wanaagsan oo loogu talagalay hal-abuurnimada badda noocyadan cilaaqaadka ah ayaa muhiim u ah aqoonta iyo u gudbinta tikniyoolajiyadda koritaanka, ”ayuu yiri Hoggaamiyaha Waaxda Badaha ee Gov. Inslee Joshua Berger ..
Shirku wuxuu soo gabagabeeyay laba maalmood oo hawlo diiradda lagu saaray Washington Maritime Blue, himilada gobolkeenna ee horumarinta warshadaha badweynta nadiifka ah, si loogu daro doonyo isku dhafan oo koronto isku dhafan ah.
Warka maxalliga ah wuxuu daboolay dhacdooyinkii rasmiga ahaa ee waftigii dawladda Norway ka hor shirkii ganacsiga. Amy Scarton, Agaasimaha Washington Ferries, waxay martigelisay VIP-da oo ay ka mid yihiin Hon. Kare Aas, danjiraha Mareykanka, booqashada markab Jumbo Mark II ah oo loo aqoonsaday beddelaad isku dhafan.
Doomaha Gobolka Washington waxay qorsheynayaan inay u badalaan maraakiibtooda ugu waaweyn quwadda korontada (Seattle Times)
Safarada Waftiga Noorwey waxay dhaqdaa Ferry si ay u aragto qorshooyinka loogu badalayo Hybrid-Electric Conversion (KNKX)
Dawladdu waxay fiirineysaa Norway hagitaan ku saabsan beddelashada doomaha loo beddelayo isku-dhafka korontada (KIRO)
← Shaqaalaha Wakaaladda Cimilada ayaa ku hogaaminaya Teknolojiyad cusub Guddiga Dib u Soo Nooleynta Dhaqaalaha Bulshada Gobolka Washington wuxuu ku maalgelinayaa $ 2.25 milyan shan degmo →